🥇 ▷ Maaddada AppleTV + waxay la jaan qaadi doontaa Dolby Atmos, HDR iyo Dolby Vision: liistada aaladaha iswaafajinta ✅
Maaddada AppleTV + waxay la jaan qaadi doontaa Dolby Atmos, HDR iyo Dolby Vision: liistada aaladaha iswaafajinta
Haddii aad u maleynaysay muddo bilooyin ah in aaladahaagu awood u leeyihiin inay ku ciyaaraan waxyaabo ka kooban 4K, HDR, Dolby Vision iyo Dolby Atmos… markaa waa caadi in haddii aad soo bandhigto buuggaaga gaarka ah ee waxyaabaha ay sidoo kale leeyihiin tayadaas, sax? Waa waxa ku dhacay Apple TV +: taxanahiisa badankood wuxuu ku jiri doonaa 4K, HDR iyo Dolby Vision oo lagu daray codka Dolby Atmos.
Laakiin inaad ku raaxeysato waxaas oo dhan waxaan u baahanahay inaan haysano aalado gaar ah oo Apple oo diyaarsan, sida dukumenti taageeraya oo ka socda Apple ayaa dhawaan shaaca ka qaaday. Sidoo kale, intaas waxaa u dheer, waxaan u baahanahay inaan haysanno xiriir internet oo ugu yaraan 25 Mbps ah (nasiib wanaag Spain dhexdeeda badanaa dhib kuma ahan kuwa leh daboolka fiber optic).
Fududeyaasha Apple HDR iyo / ama Dolby Vision waa la waafiqi karaa
Halkan waxaa ah aaladaha ku habboon waxyaabaha ku habboon HDR iyo Dolby Vision (iyadoon loo baahnayn inay ku jiraan xalka 4K):
iPhone 8 iyo jiilalka dambe
iPad Pro 12.9-inji jiil labaad iyo wixii ka dambeeya
10.5 inji iPad Pro
Intaa waxaa dheer, aaladahaani sidoo kale way ciyaari karaan HDR / Dolby Vision nuxurka 4K qaraarada:
21.5 iyo 27 inji iMac oo leh muuqaalka retina
Mac Pro oo leh ‘XDR Pro Display’
Dabcan, marka laga hadlayo Apple TV dhamaantiis waxay kuxirantahay TV-ga aad kuxirtay. Tani waa inay noqotaa 4K oo ay la jaan qaadi kartaa magacyada midabka HDR iyo Dolby Vision. IPad Pro 11-inji iyo 12.9-inji jiilka saddexaad sidoo kale waxay awoodaan inay taas sameeyaan haddii aad ku xirto TV-yada ama shaashadda.
Dispositives Apple Dolby Atmos waa la waafiqi karaa
Hadaad fiiriso kaliya dhawaaqa hareeraha Dolby Atmos, waxaan ka dhagaysan karnaa aaladaha soo socda:
Dhammaan Macs la sii daayay 2018 ama ka cusub
iPhone XS, XS Max, XR, 11 iyo 11 Pro
Apple TV iyo Apple 4K TV Xaaladda dambe, wax waliba waxay kuxiran yihiin nidaamka codka ee aad iskuxirteen.
Hal faahfaahin oo ugu dambeysa: taasi micnaheedu maahan in qalabka intiisa kale aysan awoodi doonin inay soo saaraan waxyaabaha ku jira Apple TV + Xitaa TV-ga qarniga saddexaad ee Apple ayaa sameyn kara. Iyagu way sameyn doonaan, laakiin tayo ahaan ka yar.
La wadaag AppleTV + waxyaabaha la socon doona waxay la jaan qaadi doonaan Dolby Atmos, HDR iyo Dolby Vision: liistada aaladaha iswaafajinta